Galkacyo: Bilayska iyo daraawiishta oo fuliyay hawl-gallo lagula dagaallamayo maandooriyaha. – Radio Daljir
Galkacyo: Bilayska iyo daraawiishta oo fuliyay hawl-gallo lagula dagaallamayo maandooriyaha.
Febraayo 28, 2011 12:00 b 0
Galkacyo, Feb, 28 – Ciidamo isugu jira kuwa bilayska iyo daraawiishta Puntland ayaa maanta (Isniin) hawl-gallo ammaan ka fuliyay xerada Dayax ee magaalada Gaalkacyo. Howl-galkan oo daba yaal kuwo ka horeeyay oo ay dhawaanahan ciidamu ka wadeen magaalada ayaa waxa ku dhaawacmay hal qof.
Taliyaha qaybta bilayska ee magaalada Gaalkacyo Adan Nuur Qaal ayaa Radio Daljir u sheegay in qofka dhaawacmay uu yahay rayid kaasoo ay rasaastu haleeshay kadib markii burcaddii ay ciidanku ku raad-joogtay ay bilaabeen rasaas iska caabin ah. Tafaasiil dheeraad ah kama soo bixin xaaladda qofka dhaawacmay.
Adan Nuur Qaal waxa uu Daljir u sheegay in howl-galkaas qasidigiisu ahaa in lagula dagaallamo anshax-xumida iyo waxyaabaha ka hor imaanaya diinta Islaamka sida maan-dooriyayaasha ay ka midka yihiin khamriga iyo xashiishadda. Taliyuhu waxa uu sheegay in dhammaan la burburiyay goobihii lagu khammaari jiray oo ahaa meelaha lagu gado khamriga iyo xashiishka iyada oo halkaana lagu qabtay laba baaruur oo khamri ah, qoryo iyo eedaysanayaal gaaraya 30 qof.
Taliye Adan Nuur Qaal ayaa u sheegay Daljir in ay sii wadayaan howl-galkan lagu sugayo anshaxa suubban isla markaana lagula dagaallamayo fusuqa. Taliyaha ayaa dadwaynaha reer Gaalkacyo iyo kuwa Puntlandba ka codsday in ay ciidamada gacan ka siiyaan howl-galladooda.
Todobaadyadii la soo dhaafay ayaa waxa magaalada Gaalkacyo ka socday howl-gallo ammaan oo la dareemi karo kuwaas oo lagu sugayay guud ahaan ammaanka magaalada oo aad u liita masraxna u noqotay dilka inbadan oo ka mida mas?uuliyiinta dawladda iyo wax-garadka kale ee dagaanka.
Jaamac Cabdiraxman Sh. Axmed